Ciidamo Turki Ah Oo Lagu Dilay Weerar is Qarxin Ah Oo Ka Dhacay Dalka Suuriya.
Tuesday January 30, 2018 - 20:39:49 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa melleteriga Turkiga kasoo gaaray weerar naf hurnimo oo lagula beegsaday gobolka Xalab ee dhaca waqooyiga Wadanka Suuriya.
Kolonyo ciidamo Turki ah oo Syria ku duulaya
Wararka ka imaanaya Galbeedka Gobolka Xalab ayaa sheegaya in qarax aad u xooggan lala helay kolonyo katirsan melleteriga Turkiga xilli ay ku socdaalayeen duleedka magaalada Al-ataarib oo ay gacanta ku hayaan xoogaga mucaaradka Suuriya.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya dagaalka Suuriya ayaa sheegay in ugu yaraan sedax askari ay ku dhinteen weerar naf hurnimo oo dagaalyahan kaxaynayay gaari Miineysan uu ku dhuftay gaadiid qafilan, warar kale ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada uu gaarayo 7 askari.
Khasaarahan cusub ee gaaray Ciidamada Atraakta ayaa imaanaya xilli melleteriga Turkiga uu dagaal culus uga jiro mandiqadda Cafriin ee waqooyiga Suuriya halkaas oo uu kula dagaallamayo Maleeshiyaadka Kurdiyiinta YPG iyo PKK oo dowladda Turkiga ay ku dartay liiska waxa loogu yeero Argagaxisada.
Dhinaca kale dagaallo culus ayaa wali ka socda duleedka magaalada Cafriin halkaas oo ciidamo huwan ah duullaan ballaaran ku qaadeen toban maalmoo ka hor, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidanka Turkiga iyo Maleeshiyaadka Mucaaradka ay qabsadeen degmada Alkhaliil oo kaabiga ku heysa Cafriin.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska ciidanka Turkiga ayaa lagu sheegay in 649 dagaalyahan oo Kurdiyiin ah lagu dilay howlgalka loogu magac daray Laanta Zeytuunka oo ujeedkeedu yahay in Kurdiyiinta looga fogeeyo xuduud beenaadka.
Jeneraal Ismaaciil Matiin oo ah taliyaha 2-aad ee melleteriga Turkiga ayaa booqasho uu ku tagay buuraleyda Barsaaya ee gobolka Xalab wuxuu ku sheegay in ay la wareegeen saldhigyo waaweyn oo maleeshiyaadka Kurdiyiintu ku sugnaayeen,isagoo xiran calanka maleeshiyaadka mucaaradka Suuriya ayuu ku dhawaaqay in dagaalku uu ku fidi doono Magaalooyinka Manbej iyo Koobaani
Askari Darawal Moota Bajaaj ku dilay Magaalada Muqdisho.